rafozan-doza | Oktobra 2020
Androany izany ny hoe 14 Oktobra… hankalazana sy hahatsiarovana ny 14 Oktobra 1958, izay nanombohan’ny Malagasy nitantana ny diany sy ny hoaviny. Tsy ho eo ambanin’ny fahefana sy fitantanana kolonialy Frantsay intsony.
Naika hataon'i rafanja makotroka ny fankalazana hasolo ny hoe 26 Jona kanefa moa tsy tratra sy tsy vita indray… dia hoy ah hoe aleo mba hanoratsoratra kely indray @ ity vaninandro ity handinihana sy hanaovana retrospective kely.
Raha atao tokoa mantsy ny bilan kely tsotsotra dia ahoana hoy ianao: nahavita zavatra ve isika nandritra an’izay 62 taona nitondrantsika izay? sa hoe zero manatody?
Tsy tia hanalava resaka aho fa fanairana kely fotsiny hoe: vitan’ny vazah ve dia tsy ho vitantsika? bedabe ny gasy makany an-dafy tonga dia mahay be ary tsy mena-mitaha @ hafa…
Ka nahoana ary no tsisy zavatra manjary mintsy eto?
Betsaka ny antony kely sy lehibe, tsy nampivoatra sy tsy nampandroso teto... fa io ngamba no tena folaitra voalohany indrindra hoy aho.
Satria ra ny coco aloha otran’ny manana ihany isika fa ilay fomba fandraisana ny politika hatr@ izay mihintsy no misy lesoka kely.
- Fitiavan-tanindrazana tokony mihoatra ny fitiavana tokan-trano, fitiavana fianakaviana. Ra tsy manana an’izany fahasahiana izany ny olona iray dia tokony tsy mandray andraikitra na inona io na inona. Io kian-trano antrano ary fihavanana @ maha mety azy io no mahatonga ny hoe tsy mitovy ny fanompo-mpirenena ary tsy mitovy ny lalana, fepetra mihatra @ tsirairay.
Diso utopique loatra ve izany? Jereo ireo firenena Nordique ireo fa misongadina mihintsy izany hoe “service publique” izany.